Umnenga uzama ukonwaba kulwandle olungcoliswe ngumntu | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iziphumo Isandla somntu esiyingozi kwiplanethi nendalo ingaphezulu kokucacileyo. Esi siqwenga sobugcisa esidlala nge-asymmetric balance ukugxeka ukungcola kweelwandle kwaye kuba kukho iintlobo ezininzi ezisengozini yokuphela, kwanele ukuyenza icace umgama onzulu phakathi kwabantu nezinye izinto eziphilayo.
Iphinda ichonge loo pointillism, esabelana ngayo kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo komnye umculi, ukubonisa a ubuchule obubonakalayo bokumelwa komzobo. Umnenga unxibe iimpahla zokuntywila ukuze ukwazi ukuqhubeka nokuphefumla kwindawo yawo. Yeyona rig ye-oyile inoxanduva lokugqibezela le bhalansi ye-asymmetric ekusebenziseni kakuhle abamnyama nabamhlophe.
Omnye isiqwenga sebango ngaphandle kokubonisa ulungelelwaniso lwe-asymmetric kule mibala mibini, ikwenza oko kokubini kuyilo lweqonga leoyile nakwigophe elililo lomnenga uqobo.
Sikwafumana umthetho wesithathu, esele sithethe nzulu ngazo, kunye nelo pointillism, ebonakaliswe ngokugqibeleleyo yile gcisa. un lowo ugwebayo, lo mzekeliso wegcisa elingaziwayo igama lakhe, kodwa umzekeliso wakhe omangalisayo ngaphandle kwamathandabuzo.
Isiqwenga sobugcisa esibonisa imeko yangoku yemveliso yeoyile kunye negesi, apho Umnenga uzama ukonwaba kwiqamza lawo, Ukuqubha emanzini amnyama angcoliswe yimfuneko yoqoqosho lweplanethi. Sicinga ukuba silinde usuku oluthile ukuba amanzi acoceke njengoko wayenjalo.
Ummeli wamaxesha akhoyo apho kufuneka khona utshintsho kumandla ahlaziyiweyo ahlaziyiweyo nacocekileyo abuyisa okumsulwa kulo mhlaba. Ubugcisa buya kuhlala bunathi ukugxeka izinto ezihlala zingabonwa ngamajelo eendaba aqhelekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ibhalansi ye-asymmetric yesi siqwenga ichasa isiphumo esibi sesandla somntu
Isiphumo sikaAndy Warhol kunye neFotohop